Emmanuel Macron”Dalka Faransiiska wuxuu markale difaacay dhiigiisa” – Radio Muqdisho
Emmanuel Macron”Dalka Faransiiska wuxuu markale difaacay dhiigiisa”
Emmanuel Macron Madaxweynaha wadanka Faransiiska ayaa ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka in markale dalka Faransiisku uu difaacay dhiigiisa,balse aysan dib u guranayn oo aysan u ogolaan doonin taako dadka cadawga ku ah xorriyadda,kadib weerar ka dhacay dalkaasi.
Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkaasi iyo kuwo kale oo lamidka ah,isagoo ku bogaadiyay laamaha ammaanka sida ay uga feejigan yihiin weerarada argagixisanimo.
Dhanka kale Dacwad oogayaasha Faransiiska ayaa bilaabay baaritaan la xiriira argagixisada kadib markii uu nin mindi ku hubaysani uu toorriyeeyey dad marayey waddo kutaal badhtamaha magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi.
Weerarkaasi loo adeegsaday Mindi ayaa lagu soo waramayaa in Hal qof uu ku dhintay afar kalena ay ku dhaawacmeen, ayadoo labo kamid ah dadkaasna ay xaaladoodu halis tahay.
Saraakiisha amaanka dalkaasi Faransiiska ayaa sheegay in Weerarka uu ka dhacay xaafad mashquulka badan ee lagu magacaabo Opera,sidoo kale dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in ninka mindida sitay uu ku qaylinayey “Allahu Akbar” booliiskuna ay isku dayeen in ay qabtaan kahor intaysan toogan.
Kooxda argagixisada ee Daacish ayaa sheegatay weerarkaasi oo arxandarada ah oo loo geystay dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dalka Norway oo wada dhaqaale Ururin